I-Apple iyaqhubeka nokubheja kwintengiso ye-drones yomntu wesithathu | Ndisuka mac
Ngexesha elidlulileyo besinikela iindaba zokuba ngokufika kwe-DJI Phantom 4 entsha, iApple yayingomnye wabasasazi abasemthethweni beempawu zedrone kwiivenkile zayo. Usenokuba ubukwivenkile ebonakalayo ye-Apple kwaye uya kuba nakho ukubona okokugqibela I-DJI drone ibhenciwe.
Kwezo Apple Stores, abasebenzi baka-Apple bayalelwa ukuba kusetyenziswe iidrones kwintengiso yazo. Ewe, ngoku imbali iyaziphinda kwaye iApple, okwangoku eUnited States, ibeke olunye uhlobo lwedrone kwintengiso, kule meko ikhamera yeeselfies eqhutywa ziipereji ezine njengoko kusenziwa ngedrone.
Ikhamera-drone esithetha ngayo iyazibiza Hover Passport yeKhamera kwaye ixabiso li- $ 499. Yifoto ehambelana nekhamera yevidiyo ekwimo yedrone ekuvumela ukuba uthathe iiselfie kwaye ulandele umntu lowo ukuba athathe iifoto ezintle. Iyakwazi ukurekhoda ividiyo kumgangatho we-4K kwaye ithathe iifoto ezinomgangatho we-13 MPx.
Iifoto kunye nokurekhodwa kugcinwa kwimemori yangaphakathi engama-32GB engenakususwa. Iza neebhetri ezimbini, enye yazo iyasala kwaye ine-autonomy malunga nemizuzu eli-10 yokusebenza nganye nganye.
Ngaphandle kwamathandabuzo, sisixhobo esiya kukhuthaza ukuthengiswa kwezinye iimveliso ze-Apple kwaye ungayisebenzisa nge-iPhone okanye nokuba une-12-intshi iMacBook Pro okanye iMacBook entsha kwaye iza nonxibelelwano lwe-USB-C.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » I-Apple iyaqhubeka nokubheja kwintengiso yeedrones zomntu wesithathu
Yinto embi malunga nezi drones, ngemizuzu engama-20 yebhetri awunanto. Kwividiyo bayisebenzisa ngokungathi ubuseholideyini urekhoda uhambo lwakho, urekhoda imizuzu engama-20 emva koko uthini? yonke le nto kufuneka ihambe indlela ende kwaye iyenze ibaluleke kakhulu. Nokuba ndiyayithanda loo nto ibonakala kwividiyo ibhaqa ubuso bakho kunye nerhafu ngawo onke amaxesha. kulungile. Imibuliso.